Izwe Lesithembiso: I-ROI Yokumaketha Enenzuzo Nokusimama Phambili nje | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 20, 2015 NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2015 UKatie Karr
Uyemukelwa kulokho ochwepheshe bezentengiso abakubizayo Isikhathi Sokuthola Amakhasimende.
Ngo-2016, izinkampani ezingama-89% zilindele ukuncintisana ngesisekelo samakhasimende, vs 36% eminyakeni emine eyedlule. Umthombo: I-Gartner
Njengoba ukusebenza kwabathengi nobuchwepheshe buqhubeka nokuvela, amasu akho wokumaketha okuqukethwe kudingeka ahambisane nohambo lwamakhasimende. Okuqukethwe okuphumelelayo manje kuqhutshwa ngokuhlangenwe nakho - nini, kuphi futhi kanjani amakhasimende akufunayo. Okuhlangenwe nakho okuhle kuzo zonke iziteshi zokumaketha kuyisihluthulelo esisodwa esibaluleke kakhulu kulokhu kuziphendukela kwemvelo.
Ukunwetshwa kuhlolisise lo mkhuba ku-infographic yabo yakamuva, Ukuhlomisa Ukuthengisa Kwakho Okuqukethwe Kwenkundla Yempi Entsha: Okuhlangenwe Nakho Kwamakhasimende. Umbono ophelele wokuthi ukumaketha kokuqukethwe kwakho kukuthinta kanjani okwenzeka kumakhasimende, kunikeza ngamathiphu wokuthi ungawuthinta kanjani kahle umkhiqizo wakho.
Izinto zesipiliyoni samakhasimende eziwinile zingafingqwa ngemizwa emithathu:
Yazi ikhasimende - Vuma ikhasimende, umlando wabo, nezinto ozithandayo.
Landisa ikhasimende - Thepha kwimizwa, ubonise izinto abazikhathalelayo, futhi ungachithi isikhathi ngezinto abangazenzi.
Ungashiyi ikhasimende lilenga - Nikeza izimpendulo ezifika ngesikhathi, ezifanele lapho amakhasimende efuna khona futhi kuphi.
I-ROI yokumaketha enenzuzo futhi esimeme iyatholakala. Landela lezi zinyathelo futhi ibhizinisi lakho maduze lizongena eZweni Lesithembiso.
Tags: ukuphathwa kokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweisipiliyoni samakhasimendeukuphathwa kwempahla edijithaliinfographicwandula
Ngiyi-Journalism enkulu e-IUPUI egxile kwezobudlelwano bomphakathi kanye nomncane ku-Event Management. Njengamanje ngithola ukunambitheka kwezwe lokumaketha njengomfundi osebenza ngokugcwele ku DK New Media. Isitshudeni esiziqhenyayo, indodakazi, udadewethu, umngani kanye nenja-mama.
Amasu ama-4 Wokunciphisa Ubungozi Bokukhohlisa Okuxhaphakile